चङ्गा | मझेरी डट कम
kbs — Thu, 08/07/2008 - 18:56
हिँड्दाहिँड्दै थाकेर ऊ थचक्क एउटा बाटुलो ढुङ्गामा बसी र लामो सुस्केरा हाली । घामले हो या हिँडाइको तापले हो, उसलाई निकै गर्मी महसुस भयो । निधारभरि चिटचिट पसिना आइरहेको थियो । उसले सलको एक छेउले त्यो पसिना पुछी । त्यसैबेला खेतका पहेँला धानका बालाहरूलाई चुम्दै आएको शारदीय चिसो बतासले उसको गालामा पनि स्पर्श गर्‍यो । उसलाई निकै शीतल अनुभव भयो ।
ढुङ्गामा बसीबसी उसले एकपटक शान्त आकाशमाथि नियाली । त्यो एकदम नीलो थियो । नीलो आकाशमा सेता बादलका टुक्राहरू कपासझैँ यताउता उडिरहेका थिए । तिनलाई नियाल्दै ऊ सोच्न थाली, यिनै बादलका टुक्राहरूजस्तै स्वतन्त्र उडिहिँड्न पाए जिन्दगी कति सुखद हुन्थ्यो । उड्दैउड्दै हरिया र अग्लाअग्ला डाँडापाखाहरूलाई चुम्दै रमाउन पाइन्थ्यो । अग्लाअग्ला हिमचुलीहरूको चेपमा लुकामारी खेल्न पाइन्थ्यो । आहा ! जिन्दगी साँच्चै नै कति सुन्दर हुने थियो ।
त्यसैबेला उसका आँखा आपसमा लड्दैपड्दै उडिरहेका दुइटा चङ्गामा पर्न गए । ती चङ्गाहरू स्वतन्त्र उडिरहेका थिएनन्, कसैले उडाइरहेका थिए । कसैको हातको इसारामा ती उडिरहेका थिए । यतिखेर ती दुई चङ्गा आपसमा लडिरहेका थिए जीवनका लागि । त्यस लडाइँमा अवश्य कसैको हार हुनेछ । एउटा काटिनेछ र कतै गएर खस्नेछ अथवा कतै अग्लो रूखमा गएर अल्भिmनेछ । त्यसपछि उसको जीवन सधैँका लागि त्यही रूखमा झुन्डिएर रहनेछ र एउटा महत्ताहीन जीवनझैँ समाप्त हुनेछ ।
ती दुइटा चङ्गाको लडाइँ हेरेर ऊ एकपटक झसङ्ग भई र डराई पनि । ऊ डराई, त्यो काटिने चङ्गाको भविष्य सम्झेर उसलाई डर लाग्यो । त्यो काटिने चङ्गाको अनिश्चित गन्तव्य र अनिश्चित भविष्य सम्झेर उसलाई कहाली लाग्यो । जुन कहाली अहिले ऊ स्वयम्ले भोगिरहेकी छ, एकछिनपछि त्यो काटिने चङ्गाले पनि भोग्नुपर्नेछ । उसले मनमनै सोची, त्यो काटिने चङ्गाको नियति पनि उसकै जस्तो त हो नि ! जतिसुकै माथिमाथि उडे पनि, जतिसुकै आकाशलाई चुमे पनि आखिर भुइँमा खस्नु नै त्यसको नियति हो ।
उसले पनि जीवनमा कति मीठामीठा सपनाहरू देखेकी थिई । कति रङ्गीन कल्पनाहरू गरेकी थिई । जिन्दगी हाँसीखुसी बिताउँला, रमाइरमाई बिताउँला भन्ने सोचेकी थिई उसले । तर, उसका सारा सपना र कल्पनाहरू भताभुङ्ग भए । पापी आँधीबेहरीले उसका सबै सपना र कल्पनाहरूलाई उडाएर लग्यो । अहिले उसको जिन्दगी उजाड भएको छ, उराठ भएको छ । अहिले उसको यात्रामा हात दिने न कोही सहयात्री छ, न त जिन्दगी बिसाउने कुनै सुरक्षित चौतारी नै छ ।
उसको शान्त घरमा एक दिन एक्कासि पापी आँधीबेहरी पस्यो । त्यो आँधीबेहरीले उसको सासू र ससुराको जीवन समाप्त पार्‍यो । उसलाई पनि त्यस आँधीले बिटुलो बनायो र उसलाई घाइते र अर्धमूच्छिर्त अवस्थामा एक्लै छाडेर उसको प्यारो लोग्नेलाई आफूसँगै लिएर गयो अनकन्टार जङ्गलतिर, जहाँ मान्छे बस्दैनन् । त्यहाँ पशुहरू बस्छन् र पशुजस्तै मान्छेहरू बस्छन् ।
आँधीबेहरी थामिइसकेपछि ऊ मूच्र्छाबाट ब्यूँझिई । उठेर चारैतिर हेर्दा उसको घर जलेर खरानी भइसकेको थियो । घर भन्नु अब खरानीको एक थुप्रो मात्र बाँकी थियो । त्यस खरानीलाई उसले अञ्जुलीभरि लिएर छातीमा टाँसी, मेरो घर भनेर । नजिकै दुइटा लास लडिरहेका थिए, उसका सासू र ससुराका । ती डाँडामाथिका जून भइसकेका बूढाबूढीको के दोष थियो र तिनलाई त्यसरी मार्नुपरेको ? पापी असत्तीहरू ...। उसले रुँदैरुँदै सरापी तिनीहरूलाई, जसले उसको घरलाई बर्बाद पारेर गएका थिए ।
उसले उठेर चारैतिर हेरी । शून्यता मात्र थियो, सन्नाटा मात्र थियो । कसैको उपस्थितिको आभास भएन उसलाई । आँधीबेहरीपछिको शान्त वातावरणझैँ उसको वरिपरिको वातावरण त्यस्तै शान्त थियो । मानौँ, त्यस आँधीबेहरीको डरले रूखबिरुवाहरू पनि चलमलाउन नै डराइरहेझैँ थिए । त्यहाँ ऊ एक्ली थिई । रात सुनसान थियो । गाउँ रातको सन्नाटा र निस्तब्धतामा चुर्लुम्म डुबेको थियो, मानौँ त्यहाँ केही भएकै थिएन र कसैलाई केही थाहै छैन ।
अब उसले आफूलाई नितान्त एक्लो पाई । कोही साथ छैन । कसैको सहारा छैन । एक्लो । नितान्त एक्लो । त्यसपछि उसलाई रुन मन लाग्यो । ऊ धुरधुरु रुनथाली । ऊ भक्कानिएर रुनथाली । अब उससँग रुनलाई आँसुबाहेक अरूथोक केही पनि बाँकी थिएन । घर खरानी भइसकेको थियो । सासूससुराले अत्यन्तै दुखद मृत्युवरण गरेका थिए । उसको लोग्नेको पनि अपहरण भइसकेको थियो । उसको लोग्नेलाई लिएर त्यो पापी आँधीबेहरी जङ्गलतिर कता बेपत्ता भइसकेको थियो । अब उसलाई आशा पनि छैन, उसको लोग्ने सद्दे र्फकन्छ भनेर ।
झिसमिसे उज्यालोमा उसले आफ्नो शरीर नियालेर हेरी । रातको अँध्यारोमा आएको त्यो पापी आँधीबेहरीको लछारपछारमा परेर उसको शरीरभरि घाउ नै घाउ लागेको थियो । ऊ रगतपच्छे भएकी थिई । अनि, उसले भर्खरै अपहरणमा परेको लोग्नेको सम्झनामा आफ्नै शरीरबाट बगिरहेको रगत सिउँदोमा लगाई र एकपटक फेरि भक्कानिएर घुँक्कघुँक्क रोई ।
बिहान भएपछि गाउँका मानिसहरू त्यहाँ जम्मा हुनथाले । त्यतिखेरसम्ममा गाउँलेहरूले थाहा पाए, गाउँबाट एउटा घर घटिसकेको र एउटा परिवार घटिसकेको थियो । जनगणनाको तथ्याङ्कमा एउटा घर सङ्ख्या र एउटा परिवार सङ्ख्या घटिसकेको थियो । उसको पीडाजस्तै गाउँलेको अनुहार पनि त्यस्तै आहत देखिन्थ्यो । यस्तो लाग्थ्यो सबैको उस्तै कथा थियो, सबैको उस्तै व्यथा थियो । तर, आफ्नो कथा र व्यथालाई खुलारूपमा व्यक्त गर्ने सामथ्र्य कसैमा थिएन । खालि सबैले ऊप्रति सहानुभूति व्यक्त गरे र गए । टाढाको साइनो पर्ने एक जना वृद्धले उसलाई सहारा दिने घोषणा गर्‍यो र ऊ त्यसैको पछि लागेर गई । अब भने त्यस ठाउँबाट एउटा घर र एउटा परिवार पूर्णरूपमा नै घटेको देखियो । यस देशको मानचित्रबाट एउटा घर हरायो ।
लोग्नेको सम्झना र कल्पनामा तड्पिँदै उसका दिनहरू बित्नथाले । आज आउँछ कि भोलि आउँछ भनेर दिन गन्दागन्दै महिनौँ बितिसक्यो तर पनि उसको लोग्ने फर्केर आएन । बाघको पञ्जामा परेको मृग कसरी जिउँदै फर्केर आउन सक्छ र ! आखिर त्यस्तै भयो, जुन कुराको भय उसको मनमा सुरुदेखि नै थियो । उसको लोग्ने त जिउँदै फर्केर आएन तर उसको मृत्युको खबर भने कताकताबाट ऊसम्म आइपुग्यो । एक कान दुई कान गर्दै सेना र छापामारबीचको भिडन्तमा उसको लोग्नेको मृत्यु भएको खबर गाउँभरि फैलियो । ऊ फेरि एकपटक पीडा र वेदनाले आहत भई । लोग्नेलाई सम्झेर फेरि एकपटक ऊ भक्कानिएर रोई । उसको सिङ्गै जिन्दगी बाँकी थियो । त्यसैले ऊ आफ्नो सिङ्गो तर असुरक्षित जिन्दगीलाई सम्झेर फेरि एकपटक रोई । यसरी ऊ अलिकति लोग्नेका लागि रोई भने अलिकति आफ्नै लागि पनि रोई ।
देशको एउटा अनकन्टार जङ्गलमा दुई पक्षबीच भिडन्त भयो । त्यस भिडन्तमा उसको लोग्नेको मृत्यु भयो । तर, त्यो मृत्यु न एउटा सिपाहीको थियो न त एउटा छापामारको थियो । त्यो मृत्यु एउटा सर्वसाधारण जनताको थियो, एउटा आमनागरिकको थियो र उसको निदोर्ेष लोग्नेको थियो । त्यसैले त्यो मृत्यु न सरकारका लागि विजयको समाचार बन्न सक्यो, न त विद्रोहीका लागि दुखद समाचार बन्न सक्यो । देशका लागि ऐन अरू कसैका लागि त्यो एउटा मृत्युको समाचार मात्र थियो तर उसका लागि सबैभन्दा ठूलो बर्बादीको खबर थियो । देशका लागि कुनै हानिको भएको थिएन, मात्र जनसङ्ख्यामा कोठाबाट एउटा सङ्ख्या घटेको हिसाब भयो । समय पनि यस्तो संवेदनाहीन भइसक्यो कि अब यस्तो समाचारले कसैलाई छुँदैनथ्यो । जस्तो कि मृत्युको यस समाचारले पनि कसैलाई छोएन सिवाय उसलाई ।
यदि उसको लोग्ने छापामार हुँदो हो त त्यसले लालसलाम र पार्टीको झन्डाको सम्मान पाउने थियो र उसले पनि दुई-चार शब्द सहानुभूति पाउने थिई । प्रेस वक्तव्यको प्रचार पाउने थियो । यदि उसको लोग्ने सिपाही हुँदो हो त राष्ट्रिय सम्मानमा सलामी पाउँदो हो र स्वर्गीय लोग्नेको नाउँमा दुई-चार हजार क्षतिप्ूर्ति पनि पाउने थिई उसले । तर, उसको लोग्ने सर्वसाधारण नागरिक भएकाले यस्तो केही भएन । जे भयो सो भयो र सकियो सबै कुरा । जे जति बेहोर्नु र सहनुपर्‍यो, त्यो उसैले बेहोर्नुपर्‍योे र उसैले सहनुपर्‍यो ।
उसले सहेरै बसेकी थिई । सब कुरा बेहोरेकै थिई । तर, एउटा कुराले भने उसलाई हरपल पछयाइ नै रह्यो कि सिङ्गै जिन्दगी बाँकी छ, यसलाई कसरी बिताउने ? अझ कहिलेकाहीँ छातीभित्र उठेर आउने त्यो मत्याउने र कुतकुत्याउने भावनाको तरङ्गलाई कसरी र कतिन्जेल दबाइराख्ने ? यो पिरलो उसको मनमा रहिरह्यो र यस पिरलोले ऊ निरन्तर पिरोलिरही ।
एक दिन बिहानै ऊ अनिश्चित भविष्यको यात्रामा निस्किई र हिँड्दाहिँड्दै ऊ यहाँसम्म आइपुगी । आकाशमाथि ती दुइटा चङ्गा अझै पनि आपसमा लड्दै नै थिए । थाहा छैन, कसको भाग्य कति बलियो छ र को काटिने हो ।
चङ्गा काटिने कुराले ऊ आफैँ झसङ्ग भई । ऊ पनि त काटिएको चङ्गाजस्तै त भएकी थिई नि ! त्यो काटिने चङ्गाजस्तै ऊ कहाँ पुग्ने हो, कहाँ खस्ने हो अथवा कहाँ बस्ने हो, केही थाहा छैन । केही ठेगान छैन ।
चेट्... चेट्... भन्दै मानिसहरू कराएको सुनेर उसले माथि आकाशतिर हेरी । अघिसम्म लड्दै गरेका दुइटा चङ्गामध्ये एउटा चङ्गा काटिइसकेको थियो । काट्ने चङ्गा अझै माथि आकाशिएको थियो भने काटिएको चङ्गा हावासँगै बतासिएर उड्दैउड्दै गइरहेको थियो । उसलाई लाग्यो ऊ आफैँ उड्दै गइरहेकी छ । उसलाई लागिरहेको छ, ऊ हावासँगै उड्दैउड्दै गइरहेकी छ । हावाको वेगसँगै बतासिएर कहिले माथि उड्दै र कहिले तल झर्दै ऊ परपर पुगिरहेकी छ । यतिखेर उसको मुटुको धड्कन बेसरी बढेको छ र ऊ स्वाँस्वाँ गर्न लागेकी छ । उसलाई आफ्नो मुटु खप्नै नसक्ने गरी भारी भएजस्तो लाग्नथाल्छ र ऊ छटपटाउन थाल्छे ।
चङ्गा आकाशिँदै जाँदा उसलाई कहाली लाग्नथाल्यो, धेरै माथि पुगेजस्तो लाग्नथाल्यो । चङ्गा तल खस्दा उसलाई झन् बढी कहाली लाग्थ्यो, मुटु नै खसेजस्तो भयो । अनि, उसको मुटुको स्पन्दन अझ बढी तीव्र हुनथाल्यो र उसलाई उकुसमुकुस हुनथाल्यो । त्यहीबेला हावाको गति कम भएर चङ्गा तेज गतिमा तल खस्नथाल्छ । त्यतिखेर उसलाई बेस्सरी कहाली लाग्छ र डरले आत्तिएर आँखा चिम्लँदै ऊ कराउँछे, "आकाश... ।" सायद उसको लोग्नेको नाम आकाश थियो । उसले सहाराका लागि लोग्नेलाई पुकारेकी थिई । भिडन्तमा परेर मरिसकेको उसको लोग्ने त सहाराका लागि उसलाई अँगालो हाल्न आइपुगेन तर त्यो काटिएको चङ्गा भने ढलपलाउँदै भुइँमा फ्यात्त खस्यो । त्यो खसेको चङ्गा टिप्नलाई चङ्गासँगै उसले आफ्नो लोग्नेलाई उभिइरहेको देखी । ऊ फेरि एकपटक खुसीले चिच्याई, "आकाश... ।"
त्यति नै खेर उसलाई पछिल्तिरबाट कसैले झक्झ्क्यायो । ऊ झसङ्ग भएर तन्द्राबाट ब्युँझिई । एउटा उसैको उमेरको युवक खसेको चङ्गा टिपेर ऊतिर नै आइरहेको थियो । खसेको चङ्गा त भेटियो तर उसको लोग्ने । फेरि ऊ अँध्यारो भविष्यको अनिश्चित गर्तमा रुमल्लिएर छटपटाउन थाली ।
अतिथि (not verified) — Wed, 06/22/2011 - 08:04
ए वीर उठ
दुई छाक भात पेटभरि खाका छैनन् हर्के दाइले
गजल स्वर सम्राट यो धर्तीमा रहेनन्
पर्खी बस्नु हिउँ झैं भै
अब कहिल्यै भोग्नुनपरोस निरङ्कुसताका रातहरू
एक–एक थोपाले (सहकारी गीत)
तीन मुक्तक (नमात्तिनु सुख पाउदा)